MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT U-Life MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT ယူလိုက်ဖ် သည် MPT SIM သုံးစွဲသူများအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇီ၀က- ကျန်းမာရေးအာမခံ နှင့် သက်တော်စောင့်- ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ပေါ်လစီ များကို ၀ယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း MPT အကျိုးခံစားခွင့်များ ရယူနိုင်ပါသည်
COVID-19 ကဲ့သို့ရောဂါများ နဲ့ သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် နှစ်စဉ်ပရီမီယံကြေး
5,600 ကျပ် မှ စတင်၍ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်း -09 400 083 003 / 09 400 083 004 သို့နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ( နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း၊ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း ကြောင့် အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း တို့အတွက် ပေါ်လစီ ၃ မျိုးတွင်ရွေးချယ်ကာ 1,250 ကျပ် မှ စတင်၍ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်း -09 777 100 555 သို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ( နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
ယူလိုက်ဖ် ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်း
ယူလိုက်ဖ် ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်း
ယူလိုက်ဖ် သည် MPT အသုံးပြုသူ Customers များအတွက် သီးသန့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ယူလိုက်ဖ် ကိုရွေးသင့်ပါသလဲ?
အမျိုးမျိုးသောဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ဝန်ဆောင်မှု များ ၊ ထပ်ဆောင်း အကျိုးခံစားခွင့်များဖြင့် သင့်ဘ၀ကို ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်သွားစရာမလိုပဲ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ယူလိုက်ဖ်၏ ၀န်ဆောင်မှုများအား လွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ငွေသား ထိတွေ့ မှုကင်းခြင်း
MPT ဖုန်းဘေလ် (သို့) MPT Pay မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ထပ်ဆောင်း MPT အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနိုင်ခြင်း
ပရိုမိုးရှင်းခံစားခွင့်ပေါ်မူတည်၍ ပွိင့် ၊ cash back နှင့် ဒေတာ ဘောနပ်များ ထပ်မံခံစားမိ နိုင်ပါသည်။
ဇီ၀က - ကျန်းမာရေးအာမခံ
COVID-19 ကဲ့သို့ရောဂါများ နဲ့ သေဆုံးခြင်းတို့အတွက် နှစ်စဥ်ပရီမီယံကြေး 5,600 ကျပ် မှ စတင်၍ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်း 09 400 083 003 09 400 083 004
နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ( နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
သက်တော်စောင့် - ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ
မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း၊ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း ကြောင့် အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း တို့အတွက် ပေါ်လစီ (၃) မျိုးတွင်ရွေးချယ်ကာ 1,250 ကျပ် မှ စတင်၍ ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Hotline ဖုန်း 09 777 100 555 သို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့( နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
လက်ရှိ ပရိုမိုးရှင်း မရှိသေးပါ!
၀န်‌ဆောင်မှု အတွက် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
(Q) MPT U-Life ယူလိုက်ဖ် ဆိုတာ ဘာလဲ ?
(A) MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) သည် MPT SIM သုံးစွဲသူများအတွက်သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇီ၀က- ကျန်းမာရေးအာမခံ နှင့်သက်တော်စောင့်- ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ ပေါ်လစီ များကို ၀ယ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်း MPT အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(Q)MPT U-Life ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူး တွေရရှိနိုင်ပါသလဲ?
(A)လက်ရှိ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလတွင် customer များအနေဖြင့် MPT U-Life(ယူလိုက်ဖ်) ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ၀န်ဆောင်မှုများအား လူခြင်းထိတွေ့စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း ၊ ငွေသား အသုံးပြုစရာမလိုပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုများဖြင့် ပေးချေနိုင်ခြင်း တို့အပြင် MPT ၏ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ထပ်ဆောင်း အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပါ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(Q)MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုအား မည်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ?
(A)MPT SIM Card အသုံးပြုနေသူများအားလုံး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(Q)အာမခံ အမျိုးအစား ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ?
(A)အာမခံ အမျိုးအစား ၂မျိုးရှိပါတယ်။
(Q) ဒီအာမခံနှစ်ခု ရဲ့ ကွာြခားချက်တွေက ဘာတွေပါလဲ?
(A)ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံသည် COVID-19 ကဲ့သို့ရောဂါများ ၊အခြားသော နေမကောင်းဖျားနာမှုများ ၊ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းများနှင့် ဆက်စပ် သောဆေးရုံတက်ကုသမှုများအတွက်အကျုံးဝင်ပြီးသက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ သည်မတော်တဆထိခိုက် မှုများအတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည် ဥပမာ: မတော်တဆမှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောဆေးရုံတက်ရခြင်းနှင့်အလုပ်မလုပ်နိုင် ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကသက်ဆိုင်ရာအာမခံကုမ္ပဏီ hotlines ဖုန်းများဖြစ်သည့် ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09400083003 ၊ 09400083004) နှင့် သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09 777 100 555) များသို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ (နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအတွင်း) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
(Q) MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) မှတဆင့် အာမခံ ဝယ်ခြင်းဖြင့် MPT user များအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါssမလဲ?
(A) MPT U-Life (ယူလိုက်ဖ်) ဒစ်ဂျစ်တယ်အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Customer များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များအပြင်MPTမှထပ်ဆောင်းပေးသော Promotion များကိုပါ ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(Q)အာမခံတစ်ခုစီအတွက် အခြေခံစျေးနှုန်းမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ?
(A) ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံကို (သင်၏အသက်အုပ်စုအလိုက်) ၅,၆၀၀ကျပ်မှစတင်၀ယ်ယူနိုင်ပြီး သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံကို ၁,၂၅၀ ကျပ် မှစတင်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(A)“ပိုမိုကြည့်ရှုရန်” အား နှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ၏ စျေးနှုန် ၊ အာမခံ အကာအကွယ်၊ အာမခံ သက်တမ်းကာလ နှင့် အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံခြင်း များအကြောင်းအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(Q)လူတစ်ဦး တည်းမှ ဇီဝက နှင့် သက်တော်စောင့် အာမခံ နှစ်ခုလုံးအား၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား?
(A) ၀ယ်ယူသူ၏ အာမခံ အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံ၀န်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအား ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(A)MPT Platform စာမျက်နှာ မှတဆင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အာမခံအမျိုးအစားအား ရွေးချယ်ပြီး “ဇီဝက အာမခံ လျှောက်ထားရန်” သို့ “သက်တော်စောင့် အာမခံ လျှောက်ထားရန်” ကို Click နှိပ်ကာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(A)MPT Pay သို့မဟုတ် MPT ဖုန်းလက်ကျန်ငွေနဲ့ အာမခံကြေးပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အာမခံ၀ယ်ယူရန် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေထားရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါတယ်။
(Q) အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် မည်သို့ တောင်းခံနိုင်ပါသလဲ?
(A) ၀ယ်ယူသူအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံခြင်း အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက် နှင့်စည်းမျည်းစည်းကမ်း အသေးစိတ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာမခံ ကုမ္ပဏီများ၏ Hotlines ဖုန်းများဖြစ်သည့် ဇီဝက ကျန်းမာရေးအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09400083003 ၊ 09400083004) နှင့် သက်တော်စောင့် ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ Hotlines ဖုန်း (09 777 100 555) များသို့ နေ့စဉ် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ ( နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအတွင်း ) ခေါ်ဆိုမေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါတယ်။
ပရိုမိုရှင်း အတွက် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
(Q) ပရိုမိုးရှင်း ကာလက ဘယ်အထိပါလဲ။
(A) ၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။
(Q) ဤ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ဘယ်သူတွေ ပါ၀င်ဆင်နွှဲ နိုင်ပါသလဲ။
(A) MPT ဆင်းမ်ကဒ် သုံးစွဲသူအားလုံး ပါ၀င်ဆင်နွှဲ နိုင်ပါတယ်။
(Q) ဤ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ဘယ်သူတွေ အကျုံး၀င်ပါသလဲ
(A) ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ အတွင်း MPT ဆင်းမ်ကဒ် ဖြင့် ပေးပို့ထားသောစာတိုတွင် ပါ၀င်သည့် လင့်ခ် ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ငွေပေးချေ၍ သို့ MPT Money ဖြင့် ငွေပေးချေ၍ အာမခံဝယ်ယူသူ အားလုံး အကျုံး၀င်ပါတယ်။
(Q) အပိုဆုတွေက ဘာတွေလဲ။
(A) အာမခံ ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ၀ယ်ယူထားတဲ့ စုစုပေါင်း ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး MPT Money (၅) ရာခိုင်နှုန်း အပိုဆုနှင့် MPT Club အဖွဲ့၀င် အဆင့် အလိုက် သက်မှတ်ထားသော Data အပိုဆုများကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ data အပိုဆု တွေ ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁) Diamond နဲ့ Platinum အဆင့် အဖွဲ့၀င်တွေ အတွက် (၁၀၀၀) MB
၂) Member အဆင့် အဖွဲ့၀င်တွေ အတွက် (၅၀၀) MB
(Q) အာမခံ၀ယ်လိုက်တုန်းက MPT Club member အဆင့်ပါ။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ ပြီးသွားတော့Platinum အဆင့် ဖြစ်သွားပါတယ် ဒါဆို ဘယ်အဆင့်အလိုက် data အပိုဆု ရမှာပါလဲ။
(A) အာမခံ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ငွေပေးချေသည့်နေ့၏ MPT Club အဖွဲ့၀င် အဆင့်အတိုင်း Data အပိုဆုကို ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Q) အာမခံ ဘယ်နှစ်မျိုး ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသလဲ။
(A) ကျန်းမာရေးအာမခံ ဇီဝက နဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မှုအာမခံ သက်တော်စောင့် ဆိုတဲ့ အာမခံ (၂) မျိုး ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(Q) အာမခံကို ဘယ်နေရာမှာ ၀ယ်လို့ရမလဲ။
(A) အာမခံကို MPT နှင့် MPT Money ၀က်ဘ်ဆိုက်၊ Facebook စာမျက်နှာ၊ ပေးပို့ထားသော စာတို နှင့် MPT 4U app အစရှိသည့် တို့ထဲတွင် ပါ၀င်သောလင့်ခ် မှတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(Q) လင့်ခ် ကို နှိပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဘာလုပ်ထားဖို့ လိုပါသလဲ။
(A) သင့်ရဲ့ ဒေတာ သို့ Wifi အင်တာနက် ဖွင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
(Q) အာမခံဝယ်ထားပေမယ့် MPT Money အသုံးပြုသူ မဟုတ်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
(A) အာမခံ ၀ယ်ယူခြင်း အတွက် (၅) ရာခိုင်နှုန်း MPT Money အပိုဆု ရယူရန် MPT Money ကို စာရင်းပေးသွင်းပါ။
(Q) အာမခံဝယ်တော့တခြားဖုန်းနံပါတ်နဲ့အာမခံကြေးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ (၅) ရာခိုင်နှုန်း e-money အပိုဆုကို ရရှိနိုင်မှာလား။
(A) မရရှိနိုင်ပါ။ အာမခံ၀ယ်ယူရာ၌ တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်နံပါတ် တောင်းခဲ့သော MPT ဆင်းမ်နံပါတ် ဖြင့် MPT money အကောင့်ဖွင့်ထားမှသာ (၅) ရာခိုင်နှုန်း e-money အပိုဆုကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(Q) MPT U-Life စာမျက်နှာထဲသို့ MPT ဆင်းမ်နံပါတ် တစ်ခုဖြင့် ၀င်ပြီး ငွေပေးချေရာမှာတော့ တစ်ခြား ဆင်းမ်နံပါတ် ဖြင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ် ဆင်းမ်နံပါတ် ကို ပရိုမိုးရှင်း အပိုဆုတွေ ပေးမှာပါလဲ။
(A) အာမခံ၀ယ်ယူရာ၌ တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်နံပါတ် တောင်းခဲ့သော MPT ဆင်းမ်နံပါတ်ကိုသာ ပရိုမိုးရှင်း အပိုဆုတွေ ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(Q) အာမခံ ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ငွေဘယ်လို ပေးချေ ရမလဲ။
(A) ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို ရွေးချယ်ပါ။ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ အာမခံ ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ငွေဖြတ်ယူရန် တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်ကုဒ်နံပါတ် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူမှ ထို တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်ကုဒ်နံပါတ် ကို ဖြည့်သွင်းနိုင်မှသာလျှင် ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမှ ဖြတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Q) ပထမ လူသည် MPT မှ စာတို လက်ခံရရှိပြီး ဒုတိယ လူသည် MPT မှ စာတို မရရှိပါ။ ပထမ လူသည် ဒုတိယ လူကို စာတို ပေးပို့လိုက်လျှင် ဒုတိယ လူသည် ပရိုမိုးရှင်းကို ပါ၀င်ဆင်နွှဲနိုင်ပါသလား။
(A) ပါ၀င်ဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယလူသည် MPT ဆင်းမ်ကဒ် အသုံးပြုသူ (သို့) အခြားဆင်းမ်ကဒ် ဖြင့် MPT Money အသုံးပြုသူ ဖြစ်ပါက ပါ၀င်ဆင်နွှဲနိုင်ပါတယ်။
(Q) Data အပိုဆု တွေကို ဘယ်လို စစ်ရမလဲ။
(A) data အပိုဆုတွေကို MPT 4U ထဲမှာ စစ်ပါ။ (သို့) *224# ကို ခေါ်ဆို၍ စစ်နိုင်ပါတယ်။
(Q) Data အပိုဆု တွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ သုံးလို့ရလဲ။
(A) data အပိုဆုတွေကို (၇) ရက်ကြာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
(Q) e-money အပိုဆုတွေကို ဘယ်မှာ စစ်ရမလဲ။
(A) e-money အပိုဆုတွေကို MPT Money အကောင့် ထဲမှာ စစ်ပါ။
(Q) e-money အပိုဆုတွေကို ထုတ်ယူလို့ ရပါသလား။
(A) e-money အပိုဆုတွေကို ၀န်ဆောင်ခ (၃၀၀) ကျပ်ပေး၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(Q) အာမခံ ၀ယ်ရင် (၅) ရာခိုင်နှုန်း လျော့စျေး ရမှာလား။
(A) (၅) ရာခိုင်နှုန်း လျော့စျေး မရပါ။ စုစုပေါင်း ၀ယ်ယူတဲ့ ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး (၅) ရာခိုင်နှုန်း e-money ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Q) ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ မှာ MPT Money ကို စာရင်းသွင်း လိုက်ပါတယ် e-money အပိုဆုတွေ ရရှိနိုင်ပါသလား။
(Q) MPT 4U မရှိပါ။ Data အပိုဆုများ ရရှိနိုင်ပါသလား။
(A) ရရှိနိုင် ပါတယ်။ Data အပိုဆုများကို *224# ကို ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
(Q) အပိုဆုတွေ ဘယ်တော့ရနိုင်မလဲ။
(A) MPT မှ ပရိုမိုးရှင်းကာလအပြီး ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အပိုဆုတွေကို ထည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Q) အပိုဆုတွေရပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
(A) အပိုဆုတွေကို ထည့်ပေးပြီးရင် SMS နဲ့ အကြောင်းကြားပေးပါမယ်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည် ဤအသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုပြီး ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်၍ အားလုံးသောစည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံလိုက်နာရန် သဘောတူညီပါသည်။
၁.၁။ ဤအသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“အသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ”) ကို https://www.mpt.com. mm/en/general-terms-and-conditions/ တွင်ဖော်ပြထားသည့် MPT ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားသော အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ”) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အတူပူးတွဲဖတ်ရှုရမည်။
၁.၂။ အသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအကြား ကွဲပြားဆန့်ကျင်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လျှင် အသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသောပြဌာန်းချက်များက အထွေထွေစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များပါ ပြဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိသည့် အတိုင်းအတာအလျောက် အစားထိုးလွှမ်းမိုးရမည်။
၁.၃။ အောက်တွင် သီးခြားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိသည့် စာလုံးအကြီးဖြင့်ဖော်ပြထားသော စကားလုံးများအား အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ၎င်းတို့အား ဖော်ပြထားခဲ့သည့်အတိုင်း တူညီသည့်အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ကောက်ယူရမည်။
“ DCB” သည် Direct Carrier Billing ၏အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ ငွေပေးချေနိုင်သည့် ပုံစံများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
“ဝန်ဆောင်မှု” ဆိုသည်မှာ MPT မှ (က) တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီထံမှ ယူလိုက်ဖ် (U-Life) အာမခံကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူက ဝယ်ယူနိုင်သည့် Platform အနေဖြင့် ထောက်ပံပေးခြင်းနှင့် (ခ) ယူလိုက်ဖ် (U-Life) အာမခံအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ၏ ပရီမီယမ်ငွေပေးချေမှုများအား ၎င်းထံမှ တိုက်ရိုက်ကောက်ခံရယူပြီး တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီထံသို့ ပြန်လည်ပေးချေသည့် ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သော DCB ဝန်ဆောင်မှုများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့အား ဆိုလိုပါသည်။
“Platform” ဆိုသည်မှာ MPT၏ MPT အွန်လိုင်း Platform ကိုဆိုလိုသည်။
“ယူလိုက်ဖ် (U-Life) အာမခံ” ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံသို့ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသည့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုသည်။
“ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီ” ဆိုသည်မှာ GGI Nippon Life-အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်) AYA SOMPO အာမခံကုမ္ပဏီ ကိုဆိုလိုပါသည်။
၂.၁။ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူအနေဖြင့် ပရီမီယံကြေးကို တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီထံသို့ DCB (MPTဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေ) မှတဆင့်ပေးချေရန် ရွေးချယ်မည်ဆိုပါက MPT သည် အဆိုပါပရီမီယံကြေးများအား ကောက်ခံသိမ်းဆည်းခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း၍ –
၂.၁.၁။ MPT သည် သက်ဆိုင်ရာအာမခံစာချုပ်ပါ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူနှင့် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီတို့အကြား သဘောတူညီထားသည့် အဆိုပါငွေပမာဏအား သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်၌ ဝန်ဆောင်မှုရယူသုံးစွဲသူထံမှ နုတ်ယူကာ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီသို့ ပေးသွင်းပေးရန်သာဖြစ်ပါသည်။
၂.၁.၂။ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ၏ ငွေစာရင်းအကောင့်တွင် လုံလောက်သည့်ငွေဖြည့်သွင်းထားမှုမရှိလျှင် လုပ်ဆောင်ချက်အား ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂.၁.၃။ ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်စပ်လျဥ်းသည့် အငြင်းပွားမှုများကို တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
၃။ Platform အား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ အသုံးပြုမှု
၃.၁။ Platform အား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ အသုံးပြုမှုသည် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။
၃.၁.၁။ Platform အား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ အသုံးပြုမှုအား MPT မှသတ်မှတ်ထားသည့် Data အသုံးပြုမှုနှုန်းထားနှင့်အညီ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃.၁.၂။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ MPT ဆင်းမ်ကတ်ကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
၃.၁.၃။ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှ အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုကိုသာ ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုထက်ပိုပြီး ရယူလိုပါက Platform ကိုအသုံးပြု၍ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ် အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှ အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို သီးခြားဝယ်ယူရမည်။
၃.၁.၄။ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီမှပေးသည့် မည်သည့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား ကိုမဆိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃.၁.၅။ လျော်ကန်သောအကြောင်းအရင်းခံ (Platform အား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ၏ ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာ သောပုံမှန်မဟုတ်သည့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များရှိသည်ဟု MPT မှ စုံစမ်းသိရှိရသည့်အခါ) တို့အပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ၏ Platform အသုံးပြုမှုအား MPT မှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖြုတ်ချခြင်းတို့အား ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် MPT ၏ညွှန်ကြားချက်အရ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည် ထိုက်သင့်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့အား လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဆောက်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ဖြုတ်ချခြင်း (သို့မဟုတ်) အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သည့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းခံကို ချက်ခြင်းစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် MPT အား အဆိုပါဖြစ်ပေါ်မှုများအတွက် အခမဲ့ကုစားဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၄။ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီ၊ ယူလိုက်ဖ် (U-Life) အာမခံဝန်ဆောင်မှုတို့နှင့် MPT ၏ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု
၄.၁။ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရပါက အာမခံစာချုပ်တစ်ခုစီသည် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတို့အကြား တွင်ရှိသည့် စာချုပ်တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ MPT သည် စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်သလို တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူတို့အကြားတွင်ရှိသည့် အာမခံစာချုပ်နှင့်စပ်လျဥ်း၍လည်း မည်သည့်တာဝန်မျှရှိမည်မဟုတ်ပါ။ MPT သည် အာမခံကြားလူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ပွဲစားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘဲ တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်အာမခံကုမ္ပဏီထံမှ အာမခံစာချုပ်များအား ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူအတွက် Platform တစ်ခုအား အထောက်အပံ့ပေးရုံအနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၅။ အသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပြင်ဆင်ခြင်း
၅.၁။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသည် ဤအသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အား ဖတ်ရှု နားလည်လက်ခံသဘောတူပြီးဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်။ ဤအသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်သည့်အခါတွင် MPT မှ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားသောဖော်ပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ဤအသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်အား ပြင်ဆင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ပြီးနောက် ဤဝန်ဆောင်မှုအား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းသည် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် အသေးစိတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အလုံးစုံကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူမှ သဘောတူညီခဲ့ပြီး၊ သဘောတူညီ ချက်ပေးပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၁။ ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တွင် MPT ဆင်းမ်ကဒ် အသုံးပြုသူအားလုံးပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
၂။ ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အသုံးပြုသူများသည် အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုများကို အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁၊ MPT ဆင်းမ်ကဒ် ဖြင့် ပေးပို့ထားသောစာတိုတွင် ပါ၀င်သည့် လင့်ခ် ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂၊ နှစ်သက်ရာအာမခံအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်၍ သင်၏ MPT ဖုန်းနံပါတ် ကို ဖြည့်စွက်ပါ။
အဆင့် ၃၊ ပေးပို့သော တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော အာမခံကို ၀ယ်ယူပါ။
၄။ အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုကို ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် MPT money မှ တစ်ဆင့် (သို့) ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
၅။ မည်သည့် အာမခံ ၀န်ဆောင်မှုကို မဆို ၀ယ်ယူပါက (၅) ရာခိုင်နှုန်း e-money အပိုဆုကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ (၅) ရာခိုင်နှုန်း e-money အပိုဆုကို ရယူရန် အာမခံ၀ယ်ယူရာ၌ တစ်ခါသုံး လျို့၀ှက်နံပါတ် တောင်းခဲ့သော MPT ဆင်းမ်နံပါတ် ဖြင့် MPT money အကောင့်ဖွင့်ထားရပါမည်။
၆။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ အတွင်း အာမခံ ၀န်ဆောင်မှု တစ်မျိုး (သို့) တစ်မျိုး ထက်ပိုပြီး ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် MPT Club အဖွဲ့၀င် အဆင့် အလိုက် သက်မှတ်ထားသော data အပိုဆုကို ရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
၇။ အာမခံ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် ငွေပေးချေသည့်နေ့၏ MPT Club အဖွဲ့၀င် အဆင့်အတိုင်း data အပိုဆုကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၈။ e-money နှင့် data အပိုဆုများကို ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၉။ e-money နှင့် data အပိုဆုများ ရရှိကြောင်း စာတိုပေးပို့ ၍ အကြောင်းကြားပါမည်။
၁၀။ ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်တွင် အကျုံး ၀င်မ၀င် ဆုံးဖြတ်ပေးရန် အတွက် MPT မှ MPT Money သို့ သင့်ရဲ့ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။
– e-money အပိုဆု အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် e-money အပိုဆုနှင့် အကျုံး၀င်မှု။
၁၁။ ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို MPT မှ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို ရုပ်သိမ်း (သို့) ပြောင်းလဲ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။